WOWOW Pot Filler Akasanganisa Nickel
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Faucets / WOWOW Pot Yekuzadza Brashi Nickel
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 8 kasitoma ratings
(8 kasitoma wongororo)
Kicheni faucet madziro-gadziriro yekumusoro inosiya yakawanda nzvimbo yekupikisa nzvimbo yekugadzirira basa, kaviri majoini edhisiki iyi uye ne360 madhigiri kubuda kunowedzera kuwedzera mukana kugutsa tangi yako tambo apo chitofu kana cooktop uye wogeza kunze kumadziro.
2311200 mirairo yekuisa
Kompombi yekicheni 2311200 peta: Pot yekuzadza faucet peta, pamusoro pendarira chimiro chemuviri wekunyura, pombi yekicheni uchishandisa premium yakanaka kwazvo zvinhu, Inokodzera senge yekubikira, nzvimbo yekudyira, kicheni, singi mbiri: inonaka nzvimbo (yakasvinwa nickel), yakasarudzika mhando, yakapusa kugeza , yakachena-yakachena ndarira uye yemhando yepamusoro ndarira nati, ine simba, isina-lead, isina ngura. Muviri zvinhu: simbi isina chinhu, inogara, hutano & chengetedzo yezvakatipoteredza
Kuzadza mabhasiketi ako chero zvoda kubikira hakuna kumbobvira kwakareruka kupfuura kushandisa bud filler.
Iyo yakakosha wall wall setup inobvumira kuwedzera imwe nzvimbo mukwikwidzi yako panguva imwe chete ichipa mukana wakasarudzika.
Pot filler faucet rusvingo rwemadziro: Maumbirwo emazuva ano epoto dhiza anoshamisa.
Ikitchen kunyura faucet neKUFANIRA MVURA YEMVURA ROTA: Imwechete gomba rakabuditswa neoperl aerator inopa kushushikana kwakawanda uye zvakananga kusingaperi kwemvura kurukova.
Kompombi yekicheni: KUSIMBISWA KWAKAITIKA uye 3 YEAR garandi: Tambo saizi yeiyi faucet ichave 1/2 ″ NPS uye inogona kuve yakashongedzwa ne 1/2 ″ NPS mu 1/2 XNUMX/XNUMX NPT zvinongedzo, shandisa mvura inotonhora chete. Zviri nyore kumisikidza uchishandisa hexagon wrench. Ndapota taura nesu kana iwe uine chero mibvunzo.
SKU: 2311200 Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Faucets Tags: Pot Yekuzadza, Simbi isina ngura, Wall Walled
Yekutengesa Sink Faucet / Classical / 2 Bata
Kuruboshwe kana kurudyi
Yakapetwa Knife Saizi
Pot yekuzadza pombi / NPT chinongedzo; Neoperl ABS aerator; Kuisa Zvishongedzo (ChiGerman Fischer nylon anchor bhaudhi)
r *** m August 27, 2020
Nyore kushandisa. Ndakaiisa mukati meye yangu tii shopu Ini ndaikurudzira vamwe kuti vatenge
B *** r September 7, 2019
Ndakatenga izvi kuna vamwene vangu varikuita zvekare kicheni yavo. Iye akada chitarisiko uye manyorerwo acho.Pretty solid fixture.Good Quality uye Dhizaini, Nice kutsiva
C *** nSeptember 16, 2020
Chikamu chakanakisa kupedzisa kicheni nyowani,
Mushure mechiitiko chinotyisa nechimwe chigadzirwa chakaburitsa, takasarudza kuyedza pombi inozadza pombi. Iri rinorema basa uye rinoshanda kwazvo kusvika parizvino, haridonhe, zviri nyore kwazvo kuisa. Inowirirana neyedu kicheni midziyo yemagetsi, ida brushed nickel pedzisa kutaridzika, iyo yakasimba yendarira nyini yemhando yakanaka, inofara kwazvo isu tanga tatenga chigadzirwa ichi.
M *** aSeptember 16, 2020
Ndakapedza mazuva mashoma ndichitsvaga brashe nickel muhari yekuzadza pombi nemitsetse yakachena, yemazuvano yaive mukati mebhajeti yangu. Ndakawana ichi chizadza hari paowow uye ndaisakwanisa kufara. Pombi iyi yakanaka kwazvo, yaive mhepo yekumisikidza, inoshanda mushe, uye inotaridzika zvakanaka mukicheni yedu. Haizombofi yakabhadhara mweya wakakura wemitengo zvakare. Zvakanyanya kukurudzira!
Zvinoita kuti kubikira muhari dzangu Huru kuve nyore ini handifanire kuibvisa kubva pasinki kune chitofu zvakawanda zveRubatsiro
T *** ySeptember 17, 2020
Akauya nezvose sezvakaratidzwa
Chigadzirwa chakanaka chemari yacho! Inoshanda sezvazvinofanirwa kuita!
N *** dSvondo 19, 2020 US
Kutarisa kwakanaka kwazvo. Kukosha kwakanaka, Kunotaridza kwakachena kwazvo uye kunodhura.Saved a fortune ordering this instead of buying it from one of the box stores for almost 3 times as much. Yakanyanya nyore kuisa uye inotaridzika zvakanaka!
S *** ySeptember 20, 2020
Iyi ipombi yakanaka inotaridzika uye nyore kuisa
D *** nSeptember 21, 2020
WOWOW Bridge Kicheni Sink Chisanganiso Chisanganiso - Bru ...
WOWOW Wall Mount Pot Filler Kicheni Faucet
WOWOW Commercial Kicheni Pot Pot Filler Pasita Arm C ...
WOWOW Pamusoro Rated Dhonza Down Kitchen Faucets Singl ...